Gocha dogoggorsaa dubbii himaan OPDO Obbo Addisuu Arega Qixxeessaa miidiyaa OBN dhaan dabarsan gaaga’ama guddaa biyyicharratti fideera. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVGocha dogoggorsaa dubbii himaan OPDO Obbo Addisuu Arega Qixxeessaa miidiyaa OBN dhaan dabarsan gaaga’ama guddaa biyyicharratti fideera.
Gocha dogoggorsaa dubbii himaan OPDO Obbo Addisuu Arega Qixxeessaa miidiyaa OBN dhaan dabarsan gaaga’ama guddaa biyyicharratti fideera.
Gaaddisa Dhugaa =Hagayya 24,2018. IbsaGaazexaa ABOni fi Mootumman
Naaoo Oromiyaa Waliin Laatan -Kutaa Xumuraa.
Dhufaa Jira Nu Egadhaa (Coming Soon)
Hiriira deggeersa ABO/WBO dhaaf Ona Jiddaa Ayyaanaa tti godhame . Hagayya 23/2018.
ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa.Hagayya 24/2018
Gocha dogoggorsaa dubbii himaan OPDO Obbo Addisuu Arega Qixxeessaa miidiyaa OBN dhaan dabarsan gaaga’ama guddaa biyyicharratti fideera. Waraana ABO nama lama, waraana OPDO 31fi qabeenyi baayyeen akka barbaada’uu ta’eera. Obbo Addisuu Arega Kitessaa, Waraanni Bilisummaa Oromoo hiikkachuu qaba; Qeerroo irratti Tarkaanfii Seeraa gola Oromiyaa hudnarraa fudhachuu jalqabneerra kan jedhan kunoo tokko jedhanii diigumsaan jalqabaniiru. Miilla Wayyaanee jala taa’ee kan guddate Addisu Arega, bara ijoolleen Oromoo 350 ariyamtettsi gocha basaastummaatiin nama Wayyaanee biraa galata guddaa argachuun muudama har’aa kanaa qaqqabedha.
Tim News-Shirri Addisuu Areggaa Qixxeessaa kana nuuf dhale kunoo!!
#Amboo (via Tsegaye Araarsaa)
“Awwaalcha Gootaa bilisummaa Oromoof dirree lixaatti wareegame Amboo irratti dhaadannoo fi Tarkaanfiin adda addaa futamee jira.
Awwalchaa boda Qeerroon Amboo sa’a 10:00 irratti
1ffaa. Golden bus wallaggaa irraa dhufaa jiru Amboo keessatti Hoteela Anaatolii duratti qeerroo Amboo tiin daaraa ta’ee jira.
2ffaa. Konkoolaataan mootummaa tokkos Lakk 4 Hooteela Lataa duratti Daaraa ta’ee jira.
3ffaa. Daadannoo ABOn qabsa’aa dhugaa oromoo ti.
-ABOn Hidhannoo hikkaachuun Qeerroon oromoo qabsoo dhaabuu dha.
-ABO waliin haraari hin buune taanaan biyyi kun deebeetee diigama keesssa galuuf dursa kan itti gaafatamu Dr Abiy fi Obbo Lammaa ta’uu beekuu qabu.
-Qabsoon qeerroo Opdon akka of haaromsuuf miti.
-Waliif obsuun qabsoon qeerroo laafuu miti.
Maddamar Dr Abiy jechaa jiru qabsoo oromoo bara dheeraaf furmaata hin finne.
-oromoon oromoo ajjeesuun Furmaata yaroo miti.Kkf ture.
Walumaa galatti police oromiyaa irras midhaan gahee jira.
Ammas taanaan Haraara dhugaa fiduu fi Ummanni kan filateen buluuf hanga Dhaabboleen siyaasaa Angafa ta’an (ABOn) hanga haqaan itti hirmaatutti furmaanni dhufu hin jiru.ABO Hidhannoo hiiksisuu jechuun TPLf Aangoo irratti deebisuu jechuu dha.
Opdonis of eeggannoo gochuu qabu.
Dursa Abbaan qabsoo jijjiraamaa kun oromoo fi EPRDF jidduutti haraarri bu’uu qaba.
Qeerroo!” Yaa @Addisuu Arega Qixxeessaa kunoo shirrikee kana nuuf dhale
Odeeffannoo Dogoggorsaa Ummataaf Kennuun Rakkoo Darbe Ittti Deddeebu’uuf Karaa Saaquu Taha
(Ijoo Dubbii ABO – Hagayya 20, 2018)
(SBO/VOL – HAGAYYA 20,2018) Akkuma ummatni keenyaa fi alagaanis quba qabu Addi Bilisummaa Oromoo fi Mootummaan Itoophiyaa Hagayya 07, 2018 waliigaltee araaraa taasisaniiru. Yeroo sana irraa eegalee fiixa bahiinsa isaatiif gama lachuutiin irratti hojjetamaa jira. Adeemsa hanga ammaa irraa akka mul’atutti gama miseensotaa fi deggertoota ABO fi waliigala ummata Oromootiin waliigalteen araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame kun gammachuu ol’aanaa fi deggarsaan simatamee xumurri isaatis hawwii guddaadhaan eegamaa jira. Jilli Adda Bilisummaa Oromoo kan dirqama adda addaa fi akkaataa Hoogganni ol’aanaan ABO itti simatamu haala mijeessus Hagayya 14, 2018 irraa eegalee Finfinnee seenuudhaan aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin haala gaarii fi wal hubannoodhaan hojii isaa geggeessaa jira.
Gama kaaniin sirni Abbaa-Irree kan ol’aantummaa EPRDFn hoogganamaa ture qabsoo hadhaawaa fi wareegama qaalii ummatootaa fi addatti wareegama dargaggootaa fi ummata Oromoon dhiibamee haalli siyaasaa Itoophiyaa daandii jijjiiramaa qabatu illee, jijjiiramni kun haala amansiisaa irra hin geenye. Yeroon amma keessa jirru akka yeroo cehumsaatti kan hubatamuu qabuu fi humnootni gara garaa kan jijjiirama eegalame kana duubatti deebisuu fedhan ijibbaata gara garaa kan itti gochaa jiranii dha.
Meeshaan lolaa fi maallaqni guddaan seeraan ala dhoksaadhaan sossoofamu kan yeroo adda addaatti tohannaa jala ooluun isaa qaamota mootummaatiin gabaafamu eenyuun hidhachiifamee eenyu irratti lola banuuf akka qophaawamaa jiru wanti ifa tahe hin jiru. Lola karaa adda addaatiin humnootni qaamota mootummaatiin hidhachiifaman ummata keenya irratti geggeessaa jiraniinis wal qabatee haalli waliigalaa yeroo ammaa ummata keenyatti yaaddoo nageenyaa uumee kan jiru tahuun dhokataa miti.
Haalli jiru akkana tahee osoo jiruu, odeeffannoon dogoggorsaan “WBO hiikkachiisuuf waliigaltee irra geenyee jirra.” jedhu gama hoogganoota ol’aanoo OPDO keessaa tokko kan tahan obbo Addisuu Araggaatiin ummataaf kennamuun dogoggora guddaa fi tasa akkasitti kan wal tahame kan hin jirre tahuu hubachiifna.
Odeeffannoo dogoggoraan, mediadhaan kan barbaadan gadi dhaabuuf godhamu kun yaaddoo nageenyaa ummata keenyaa kan daran hammeessuu fi rakkoof kan karaa saaqu jennee amanna. Dogoggorootni dhimma gurguddaa akkasii irratti taasifaman ammoo badii kana duraatti kan nu deebisan waan taheef, eeggannoon irraa godhamuu akka qabu hubachiifna. Obbo Addisuu Araggaa ibsa waloo bakka bu’aa ABO J/Toleeraa Adabaa waliin tahuudhaan guyyaa dheengaddaa (Hagayya 18, 2018) gaazexeessitootaaf kennan keessatti ture kana kan dubbatan.
Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin waliigalteen akka obbo Addisuu Araggaa ibsanitti irra gahame akka hin jirre hubachiisaa, dhimma jabaa akkasii akka fedhanitti kan ibsan akka hin taanes hubachiisuu barbaada. Haa tahu malee jechoota dogoggoraa akkasiitiin araarri ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame kan hin gufannee fi kan hin tuqamne tahuu ummata keenyaaf ifa gochuu feena. Jechoota dogoggoraa akkasiis wal hubachiisuun akka sirreeffaman mirkaneessina. Kanaaf, miseensotni ABO fi ummatni keenya dhimma kana irraa ka’anii yaaddoon qabamanii hojiitti fuulleeffatuu irraa akka hin dagatamne dhaamna.
Waan taheef, ummatni keenya akkuma amma gochaa jirutti garaa qulqulluu fi bayyanootaan, akkasumas, obsaa fi bilchina ol’aanaadhaan adeemsa waltahiinsaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiruuf deggersaa fi hojitti hiikuu gama isaan of qusannoo malee taasisuu akka itti fufu ABOn jabeessee dhaama. Dhimmi hiree WBO kan gama fuula duraa akkuma amma dura ibsame Koree gama lachuu irraa utubamtuun mariin bal’aan geggeeffamee murtii maayyii kan argatu tahuu irra deebinee addeessina.
Obbo Addisu Arega Kitessa dubbi himaan OPDO toora ‘”Feesbuukiisaarraa’ nahaqee/Block’ nagodhee jira. Hajii Jawar Siraj Mohammed’fi #MilkeessaaMidhegaatti aanee kun nama 3ffaa ta’uusaati.
#Gowummaa # 1
#Taajjabbiitti balbala cufanii ba’uun nidanda’amaa? Utuu danda’ama ta’ee akkamittiin ‘Block’n ala ta’uun shira Hajii JSM waggaa 3 guutuu gadi guuruun Oromoo keessaa kineessine?
#Waan #Block‘ nagooteef shirakeefi xaxakee ati ilmaan Oromoorratti gochaa jirtu nan xiqqeessa sitti fakkaataa? Kan duriirra caalaa dachaa lamaan humnoomee xiiqa’een humna Takinooloojii ammayyaa gargaarameen gola ‘FB kee keessaa jigseen dhalootaaf gorsa kenna. Kan ati qabsoo bilisumama Oromoo cabsuuf halkaniif guyya miindaa halagaan bitamtee dalagdu deebi’ee suma akka nyaatu beeki.
Ati miindeffamtee barreeffama namni siif erguufi miidiyaan sitti ergan maxxansaa oolta. ANimmoo tolan qubaa bishaa’eedhaa sammuukoo cuunfee dhaloota badiirraa baraaraa jira. Kanaaf haqni aniq qabadhee jiru kankee akka liqimsuu danda’u ani shakkii tokkollee hinqabu. Kanaaf nigowwoomte.
Barrikee gabaabadha. Kijibni maayilii baayyee deemuu hindanda’u. Ani ilma haqaaf dhalatedha. Abjuu dhalootaatu naharka jira. Kankee taayitaa shiraan yaabdedha. Taayitaan kun nidiigama. Diigamnsisaas fagoo miti. Kanaaf nitaajjabamta.
Kallattiin ani ittiin golakee keessa oolu hedduudha. Qaamaanis kan sibira oolu faanan hidhata qaba; Takinooloojiidhaanis sincaala. Hamma qodaa mana jireenyakee keessaa lakkaa’ee bakekerra afuuttan barreessa. Kanaaf, Izgoo’ jettee hamma ati watwwaattuttan har’aa ka’ee mala dhahaa oola.
Barri ani itti dhufee yoo achi teessee na eegdeef si argu nidhufa. Siqaanessuufan jira. Oromiyaanis nibilisoomti!
Kan Addisuu anatti dallansiise, kan inni torban kana yeroo lama miidiyaatti ba’ee kijiba jabaa kijiba #TIM n dhifa baasuukoofi xaxaa inni ijaaraa jiru tokko argee #TIM odeeffannocha baasuudhaan kukkutuusaati!-Itti fufa!-FB birootiinis akka dhuftanii guyyaa guyyaan #TIM jala ooltan quban qaba
Beekan G Erena, Hagayya, 23, Boston, USA
The Oromo People Trust Promises Regardless of the Past Experience and History
Hagayya 24-2018: Jimma Horroo magaalaa Nuunnuu-Kunoo waraanni Wayyaanee